अल बिदा महाश्वेतादेवी – eratokhabar
अल बिदा महाश्वेतादेवी
नक्सलवादी आन्दोलनलाई भारतीय साहित्यमा स्थापित गराउने लेखक
ई-रातो खबर २०७३, २६ साउन बुधबार ११:५० August 10, 2016 1335 Views
भारतीय जनसाहित्यको अग्रीम पङ्क्तिमा रहेकी लोकप्रिय कवि तथा लेखक महाश्वेतादेवी (सन् १९२६ सन् २०१६) को ९० वर्षको उमेरमा गएको बिहीबार कलकत्तामा दुःखद् निधन भएको छ । बंगाली भाषा साहित्यमा विशिष्ट नाम स्थापित गराउन सफल महाश्वेतादेवीको जन्म सन् १९२६ मा ढाकामा भएको थियो । उनका पिता मनीष घटक पनि बंगाली भाषाका स्थापित लेखक थिए । महाश्वेताका छोरा पनि एकजना स्थापित कवि हुन् । जब नक्सलबाडी आन्दोलनमा भयानक दमन र हत्याहरू भए तब महाश्वेतादेवीले ‘मृत्यु उपत्यका हो मेरो देश’ नामक कविता लेखिन् । त्यसको जबाफमा पुत्रले ‘मृत्यु उपत्यका होइन, मेरो देश’ कविता लेखेका थिए । जुन आजपर्यन्त चर्चामा छ ।
महाश्वेतादेवीको विद्यालय स्तरको अध्ययन शान्ति निकेतनमा भएको थियो । कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी भाषा साहित्यमा एम.ए. उत्तीर्ण गरेकी उनले त्यसै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनसमेत गरेकी थिइन् । उनले लामो समयसम्म बिहार र बंगालका दुर्गम तथा ग्रामीण भेगहरूमा बिताएकी थिइन् । यसले गर्दा उनका रचनाहरूमा यस क्षेत्रको प्रतिबिम्बन देखिन्छ । सन् १९७९ मा उनलाई साहित्य एकेडेमी पुरस्कार दिइएको थियो ।
महाश्वेतादेवीका दर्जनौँ कृति लोकप्रिय छन् । तर ‘१०८४ की आमा’ सर्वाधिक चर्चित उपन्यास हो । त्यो कृतिमा महाश्वेतादेवीले नक्सलबाडी आन्दोलनको सौन्दर्यीकरण गरेकी छिन् । हजारौँ राजबन्दीहरू प्रहरी हिर ासतमा मारिन्थे र तिनका आफन्तले लासमा बाँधिएको नम्बर हेरेर आफ्ना आफन्तको लास बुझ्नुपथ्र्यो । त्यही कटु यथार्थलाई कवि तथा लेखक महाश्वेतादेवीले सशक्त वाणी प्रदान गरिन् । उनले नक्सलबाडी आन्दोलनका त्याग, बलिदान, समर्पण, आदर्श र मूल्यहरूलाई स्थापित गर्नमा नै बिताइन् तर उनी कहिल्यै नक्सलवादी वा कम्युनिस्ट पार्टीमा भने आबद्ध भइनन् । त्यसैले उनलाई नक्सलवादी आन्दोलनलाई भारतीय साहित्यमा स्थापित गराउने लेखकका रूपमा पनि बुझिन्छ ।
पछिल्लो समयमा महाश्वेतादेवीले पश्चिबंगालमा राजनीतिक बन्दीहरूमाथि ममता बनर्जी सरकारले गरिरहेको जङ्गली व्यवहारको खुलेर विरोध गरेकी थिइन् । त्यसकारण उनलाई सरकारले छड्के आँखाले हेर्ने गथ्र्यो । उनको निधनले भारतीय श्रमिकवर्ग र जनसाहित्यमा ठूलो क्षति भएको छ । यो दुःखद् घडीमा महाश्वेतादेवीप्रति हाम्रो पनि श्रद्धासुमन !
पढन जानेहरुले यो वर्ष १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुजि विदेश पलायन